Aperçu du fichier FANARENANA par Tsilavina Ralaindimby - Page 8/9 - Fichier PDF
Ao anatin’izany fanantontoloana mihontsakotsana izany koa anefa dia mitsimoka ny tarapihavaozana samihafa, manome hasina ny maha-olona, miezaka mandrafitra fiharian-karena mandala
kokoa ny rariny sy hitsiny, mitandro ary miady mafy mba tsy ho fandripahana sy tontolon-javaboahary
ny lazaina fa fandrosoana, manao ny fikarohana samihafa mba ampitaovana izany lalam-pivoarana
mitandro ny maha Olona izany, miady amin’ny fikirakirana simika sy zenetika hamoronana karazantsakafo izay ahian’ny mpikaroka maro ho fototr’aretina manimba ny olona fa mampitombo kosa ny
tombom-barotra ho an’ny renivola, miady mba tsy ho fanariam-pakon’ny tany lazaina fa mandroso ny
tany mikatsaka ny lalam-pandrosoana sahaza azy, sns.
Izany no tontolo manodidina an’i Madagasikara mikaroka ny lalam-piharenana sy fihavaozana
ka raha fitondrana tsy miorim-paka kokoa amin’ny vahoaka sy ny hery velona rehetra no ajoro, raha
tsy olona manana vina ho an’i Madagasikara, sady manam-pahaizana no manam-panahy sy
fahasahiana no mitondra, dia ho toa ny ravi-maina entin-driaka fotsiny ny ampitson’i Madagasikara
anaty fanantontoloana. Isika rehetra misavily eny amboniny.
FIFAMPITONDRANA AFA TAHOTRA,
MALAGASY MATOKY NY TENANY SY MIFANAJA
Noho ny « Fifandimbiasam-pahefana valin-kitsaka » sy ny kolontsaina mandala hery setra
terak’izany, noho ny fivangongom-pahefana any an-tampony izay tsy misaraka amin’ny didiko fehylehibe, noho ny kolontsaina fizahozahoan’ny manampahefana sasany, noho ny fitondran-tenan’ny
olom-boafidy sasany, fandoto iray tandroka, dia tankina ny feom-bahoaka. Etsy andaniny, ny
fototenin’ny voambolana hoe Fanjakana moa dia Mpanjaka rahateo, ka dia mora mibahana ao antsain’ny sarababen’ny olona ny akon’ny kabary tsy valiana fahizay. Santionany vitsivitsy amin’ny taratra
fifampitondrana raiki-tahotra ireo. Tsy misy fanarenana sy fahombiazana ho vita anaty tahotra ary ny
fitiavana izay setrin’ny tahotra dia tsy fahalemena akory. Fifanajana sy fifampitokisana no ilaina
hitsimoka indray eo amin’ny voahosotra ho mpitondra sy ny olom-pirenena, loharanon’ny fahefana
rehetra fa mora adino rehefa avy naneho ny safidiny.
Ny fanomezana hasiny indray ny fifampitondrana repoblikana izay miorim-paka eo amin’ny
olom-pirenena afa-tahotra, voahaja eo amin’ny safidim-piaraha-monina nampindramany ny fahefany,
malalaka hanana ny heviny sy haneho izany no lasitra ho an’ny tokontanim-panarenana izay
mampangetaheta ny mandala ny rariny sy hitsiny rehetra. Eo amin’izany tokontany nohavaozina izany
no hamaritana ny fitsipi-dalao vaovao eo amin’ny fifanandrinana ara-politika manalavitra toa fasambao ny « Fifandimbiasam-pitondrana valin-kitsaka ». Eo koa no ifampitaizana amin’ny fiandraiketampahefana satria ny avo no afaka manetri-tena fa ny iva no alaim-panahy anambony tena, hizahozaho.
Avo dia avo ny fahefan’ny voahosotra sy voatendry hitondra Firenena ka ny fanazaran-tenany
voalohany dia ny manongilan-tsofina lalandava amin’ny feom-bahoaka.
Adidy roa sosona ny an’ny mpitondra ankehitriny izay itontonan’ny vokatry ny dimam-polo
taona mahery tsy nahitan’ny Firenena malagasy ny lalam-pahombiazana hitan’ny firenen-kafa
nitovitovy tantara taminy, miampy ny vokatry krizy lavareny nandritra ny dimy taona. Voalohany, tsy
maintsy manamaivana haingana ny fanaintainana isan-karazany, isam-baravarana. Tsy ho vitan’ny
ravoravo atentina sy ny vaha-olana vonjy maika anefa izany fa tsy maintsy omena dikany mazava. Ny
fampisiana dikany dia ny fametrahana ireo andiam-baha-olana maika anatin’ny vina mety ho
lavitr’ezaka, takatry ny sain’ny sarababen’olona, mampitsimoka fanantenana sy fifampatokisana ka
manambatra ny herim-po sy finiavana hiara manarina ny Firenena. Raha tsy voa-ainga hiara-mandroso
ny olona, tsy misy n’inon’inona handeha sy hiova eto ary hihombo ny aretina.
Mendrika fiainana tsara lavitra noho izao ny malagasy noho ny lovan-karena voajanahary
iriariavany sy ny toerana misy ny taniny. Mendrika ampitso mamiratra irian’olona fa tsy haniry olona
Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 00269300.